हरेक समय, जबरजस्ती दुखाइको सामना गर्दा, मानिसहरू यसलाई कम गर्न, छालामा सबैभन्दा फरक तयारीमा रमाउन खोज्छन्। यदि तपाइँ छनौट गर्नुभयो भने, प्राथमिकतालाई प्रभावकारी र प्राकृतिक तयारीमा दिइएको छ। यस लेखमा हामी आवश्यक तेलहरूको उपचार गुणहरूमा आधारित एक अनैतिक औषधिलाई विचार गर्नेछौं - "करमोलिस्" (जेल)।
"कर्मोलिस्" श्रृंखलाको तयारीको उत्पत्तिमा त्यहाँ एक क्याथोलिक महान् अर्डर - कार्र्मलाइट छ। मध्य युगमा, अर्डरका भिक्षुहरू अनौठो कार्मोल तेल पकाउन सक्षम हुनका लागि प्रसिद्ध भए जुन चिसो, आंतों को रोग, विभिन्न चोट र घाउहरु को उपचार गर्न सक्छ। यसलाई "कार्मलाइट पानी" भनिन्छ। औषधीय औषधिको संरचनाले बिरुवाहरूको आवश्यक तेलहरू मठ नजिकको विकास गर्दै थिए। धेरै शताब्दीका लागि, यो नुस्खा गोप्य राखिएको थियो, र केवल 1 9औं शताब्दीमा अर्डरले आफ्नो गुप्तता प्रकट गर्यो। नतीजा, औषधि "कार्मोलिस" देखा पर्नुभयो। जेल "कार्र्मलाइट पानी" मा आधारित छ र हल्का एनाल्जेसिक र सुखदायक प्रभाव छ। रूसमा यो 1880 मा जानियो।
संरचना र जेलको गुणहरू
मुख्य अवयवहरू उकुलिप्टस, थाइम, एनिन्स, रोसेमेरी र अरुको आवश्यक तेलहरू हुन्। प्रभाव, मर्महोह, टर्पन्टाइन तेल, क्यामोर र मेथिल सल्सेलिलेट (भिन्का तेल) सुधार गर्न "कार्लोलिज" (जेल) मा थप अवयवको रूपमा थपिएको छ।
जेलको संरचनाले सक्रिय पदार्थहरूलाई छाला घुमाउन र सही ठाउँहरूमा संचित गर्न अनुमति दिन्छ। प्राकृतिक प्राकृतिक घटकले शरीरको शक्तिलाई सक्रिय पार्छ र प्रतिरक्षा बलियो बनाउँछ। औषधिमा स्थानीय विरोधी भ्रामक र एन्जिज्जिक प्रभाव छ। यसबाहेक, यसले सूजन र युद्धलाई राहत दिन्छ। लुगामा जेल प्रयोग गर्दा त्यहाँ कुनै निशानहरू बाँकी छैनन्। विरामीहरूले "कार्मोलिज" लागू औषधिको आवेदन पछि प्रभावको निरन्तर संरक्षणलाई ध्यान दिए। निर्देश जेल गठिया र ओस्टियोकोन्ड्रोसिस को लागि उपयोग को सिफारिश को, साथ ही चोट र संयुक्त क्षति पछि। दबाइ79 र 145 ग्राममा पाइन्छ। शेल्फ जीवन लामो छ र5वर्ष हो।
"कार्मोलिस": मूल्य, कहाँ किन्न
"कार्मोलिस" - प्रमाणित औषधि, त्यसैले यो कुनै पनि फार्मेसीमा बेचेको हुन सक्छ। यो धेरै लोकप्रिय छ, र तपाइँले यो औषधी बिना धेरै कठिनाई पाउन सक्नुहुनेछ। तर, यदि तपाईंको शहरमा यो अवस्थित छैन भने भने, त्यसपछि इन्टरनेट सेवाहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। अनलाइन फार्मेसीहरूको गोदाममा औषधीहरू सधैं उपलब्ध छ। यसकारण, तपाईलाई मात्र यो साइटमा चयन गर्न आवश्यक छ, र नजिकको भविष्यमा तपाइँ औषधिको "कर्मोलिस" को उपचारलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। 72 जी को एक ट्यूब को मूल्य 500-600 रूबल हुन्छ। तदनुसार, ठूलो क्षमताको साथ एक ट्यूब अधिक महंगा छ। यो आंकडा मार्च 2016 को लागि उपयुक्त छ।
प्रयोग र contraindications विधि
संयुक्त मा दुखाइको साथ, दबाउ बिना कुनै सर्कुलर गतिमा लागू हुन्छ। यदि तपाईं गर्दन वा पछाडिको व्यवहार गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं उत्पादनलाई रौतहट गर्न सक्नुहुन्छ। आवेदन प्रक्रिया को प्रभाव को सुधार को लागी, एक गर्म कपडे संग दर्दनाक क्षेत्र को कवर गर्न आवश्यक छ। जेल मालिशको रूपमा उपयुक्त छ। यसले पूर्णतया मांसपेशिहरु लाई दुखाइ र विश्राम गर्दछ। पुनर्वासशील मालिश संग विच्छेदन, sprains र चोटहरु पछि रिकभरी समय कम गर्दछ। "कार्मोलिस" प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छैन यदि गर्भावस्था र लक्षणको समयमा, गुर्दे को भागमा स्पष्ट विकारहरू छन् भने। यो घातक खोल्न र क्षतिग्रस्त छाला खोल्न सकिँदैन। यदि मर्मत औषधिको घटकमा एलर्जी हुन्छ भने कार्मोलिलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ।
यो कुनै रहस्य छैन कि दाँतको विकासको समयमा साना बालबालिकाले बेपत्ता व्यवहार गरे। तिनीहरूले कठोर वस्तुहरू खुट्टामा झुन्ड्याउनको लागि आफ्नो मुखमा टाढा राख्छ जसले निरन्तरता पाउँछ। यस समस्यालाई हटाउन बालबालिकाको लागि एक विशेष फाइटोगल "कर्मोलिस्" विकसित गरिएको थियो। यसमा एक ठंडा र नरम प्रभाव छ, प्रभावी ढंग देखि मसू देखि जलन को हटान। त्यो बच्चाले औषधि छोड्न सकेनन्, xylitol यसलाई थपियो - चिनियाँ को एक विकल्प, जुन कारवाही गर्दैन। फिइटोगेलको मुख्य अवयवहरू च्याम्माइल, ऋषि, टकसाल, र प्रोपोलिस ट्रेमोरको आवश्यक तेल हुन्। औषधि प्राकृतिक उत्पादहरूमा आधारित छ किनकि, बच्चाहरु को औषधि मा प्रयोग को लागि उत्कृष्ट छ। लागू गर्नुहोस् यो गाह्रो छैन: तपाईं जेलको 2-3 सेन्टीमिटर निचोड गर्न र गमको चिल्लो भागमा लाग्न आवश्यक छ। यो बच्चा राम्रो हुन्छ र यो रातमा यो राम्रो हुन्छ। ड्रग लागू गर्न दिन भन्दा बढी पटक सिफारिश गरिएको छैन।
औषधीको बारेमा माथिको सारांश संक्षेप गर्दै, यो उल्लेखनीय छ कि यसको लागि नुस्खा एक धेरै लामो समय अवस्थित छ र शताब्दीका लागि परीक्षण गरिएको छ। यो आधुनिक समाजको भिक्षु र मानिस दुवै द्वारा प्रयोग भएको थियो। अहिलेसम्म, "कार्मोलिस" ले आफ्नो लोकप्रियता राखेका छन्, जसले यसको उच्च प्रभावकारीतालाई सिंथेटिक पेन्टिलेटरहरूको तुलनामा संकेत गर्दछ। सम्पूर्ण रूपमा शरीरमा अभिनय गरेर, जनले आत्म-उपचार र मानव शरीरको भण्डारहरूको थप पूर्ण प्रयोगलाई बढावा दिन्छ। उपचार आवश्यक तेलहरू प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउँछ र सम्पूर्ण प्राकृतिक घटकहरू छन्, जुन प्राकृतिक रिकवरी रोज्ने व्यक्तिहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो ड्रग "कार्मोलिस्" को शक्ति हो। जेल दुखाइबाट मुक्त हुन र संयुक्त रूपमा प्रकार्यको प्रकार्य पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ।
Anticancer चक्की "tamoxifen": प्रयोगको लागि निर्देशन
एंटीबायोटिक generalists "Zitrolid": प्रयोगको लागि निर्देशन
नक्कली औषधि: मान्छे हरेक दिन मरिरहेका छन्
गर्भावस्थामा औषधि "Entosgel"
जो मार्को पोलो द्वारा भ्रमण एशिया मा आफ्नो यात्रा देशहरूमा?
बट नर्टन को मन्टल। आफ्नै हातहरू ढाँचा गर्नुहोस्। एक हुड Bat Norton संग एक विशाल को पैटर्न
अनावश्यक कपाल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कसरी प्रयोग गर्ने?
मार्च 8 मा सुन्दर मेकअप
कसरी कागज र गोंद को बाहिर एक मानिस बनाउन
पल्मोनरी क्षयरोगका: लक्षण सचेत हुनुपर्छ
मानव शरीर रचनाको विज्ञान: हात को संरचना
टिकट OneTwoTrip: समीक्षा र वास्तविकता
परिभाषा र प्रकार: फाइल के छ